China slurry sokufunxa Hose kwemveliso kunye Factory | UZebung
Oluludaka sokufunxa Hose
Oluludaka sokufunxa ithumbu
I-ZEBUNG iRubber Dredging hoses ziyinjongo ezakhelwe iimfuno ezizodwa zabaxumi bethu. Sikwindawo yokwakha ubungakanani beethumbu ukusuka kwi-100 mm ID ukuya kwi-ID ye-2200 mm. Abaqulunqi bethu baya kukhetha ezona zixhobo zifanelekileyo kuluhlu olubanzi lweemveliso ezikhoyo kuthi ukuhlangabezana neemfuno zenkonzo kunye neemfuno eziceliwe ngabaxumi bethu okt ukunxiba ukuxhathisa, ukulinganisa uxinzelelo, amandla oqiniseko, ukugoba amandla kunye nezinye iiparameter.
Ngokubanzi i-ZEBUNG Rubber Dredging Hoses iqulathe ulwelo lwangaphakathi olunokuhlengahlengiswa ukuze kuhlangatyezwane nemfuno ethile yendlela ehanjisiweyo. Isalathi sokunxiba sinokuphunyezwa kulungelelwaniso lwee hoses ezithutha izinto eziphakathi.
Amathumbu okubambisa akhuselweyo asetyenziswa kumgca wokubuyela emva, alungele ukuhambisa izinto ezibukhali, ezinkulu nezinzima ezinje ngamatye e-coral, grit kunye nelitye eligugileyo. Ngesakhiwo sokumelana nesinxibo sokwakha ngaphakathi, umaleko wangaphakathi unentsebenzo elungileyo yokunxiba kunye nokumelana nokuqina.
Ukucaciswa kunokuyilwa ziimfuno zabathengi.
Iidayimitha zangaphakathi ukuya kuthi ga kwi-1300mm, ubude obahlukeneyo kunye noxinzelelo lweendawo.
Uluhlu lweepayipi eludongeni: ukusuka kwi-15mm ukuya kwi-100mm.
Ukukrwada okunganyangekiyo kunye nokugoba okunganyangekiyo.
Kukulungele ukufaka, ukuguquguquka ukusebenzisa kwaye kukhuselekile.
Ukusebenza engile: 0 ° ukuya 45 °
ubushushu obusebenzayo: -20 ° C ukuya kuma-50 ° C
Ububanzi bombhobho: 200mm-1100mm
Esisangqa sangqa: 340mm-1550mm
Esisangqa ubukhulu: 25mm-65mm
Ukutyeba kwangaphakathi: 12mm-45mm (ungenziwa ngemfuneko)
Umngxunya kwi-flange: 8-36
Hole ubukhulu: 22-36mm
Sizabalazela ukuba yinkampani ehamba phambili yokuhambisa umbane kunye namandla kwihlabathi.Ukuze senze iimveliso zethu zingaqhubi nje kuphela kwimigangatho yoshishino; kodwa kugqithise kulindelo lwabathengi bethu.
ubungakanani Isazisi WP ubude
24inch I-600mm 15bar ~ 20bar 11.8m
QAPHELA: ID900mm kunye ne-1200mm, ezinye iiparameter ziimfuno zakho
Egqithileyo Ukudada kuMbhobho wamanzi
Okulandelayo: Umbhobho womoya
Oluludaka sokufunxa sokukhupha umbhobho
Ukufunxa Isamente oluludaka Water Hose
Nxiba oluludaka Resistant sokufunxa ngerabha Hose